कसरी बनाउने राहदानी ? | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी कसरी बनाउने राहदानी ?
on: ३० भाद्र २०६९, शनिबार ००:०० रोजगारी
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कागजात हो राहदानी । राहदानीविना कुनै पनि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँदैन । यदि कुनै पनि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छ भने उसले पहिलो काम नै राहदानी बनाउने गर्नुपर्छ । हस्तलिखित राहदानीबाट गैरकानूनी क्रियाकलाप बढ्दै गएपछि सरकारले १ वर्ष अघिदेखि मेशिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । एमआरपी बनाउने प्रक्रिया केही लामो छ । सरकारले हस्तलिखित राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमै बनाएर दिने गरेको थियो । तर, एमआरपी बनाउनका लागि आवश्यक स्रोत र साधन अभावका कारण सम्पूर्ण नागरिकलाई केन्द्रीय राहदानी विभागबाटै बनाएर दिने गरेको विभागका महानिर्देशक यादव खनालले बताए । ‘एमआरपी बनाउने प्रक्रिया अलि झन्झटिलो छ,’ उनले भने, ‘एमआरपी बनाउने मेशिन निकै महँगो पर्ने भएकाले पनि केन्द्रीयस्तरबाट मात्र एमआरपी बनाइरहेका छौं ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले केही समययता सर्वसाधारणको सुविधालाई दृष्टिगत गरी सबै जिल्लाबाट एमआरपी फारम सङ्कलन तथा पासपोर्ट वितरण गर्दै आएको छ । परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एमआरपी फारम सङ्कलन तथा वितरण गर्न थालेको हो । एमआरपी बनाउनका लागि फारम भर्ने तरीका तथा बनाउने प्रक्रिया पनि केही अप्ठ्यारो छ । शुरूमा एमआरपी बनाउन नागरिकतालाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ । नागरिकता प्रमाणीकरणका लागि सरकारले सम्पूर्ण जिप्रकामा फारम उपलब्ध गराएको छ । सो फारममा सम्बन्धित जिप्रकामा गएर आफ्नो नागरिकतालाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ । जिप्रकाबाट नागरिकता प्रमाणीकरण नगराएसम्म परराष्ट्रले एमआरपी दिँदैन । केही आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले नक्कली नागरिकता प्रयोग गरी गैरकानूनी तरीकाबाट एमआरपी बनाउन थालेपछि जिप्रकाको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको हो ।
विभागले हाल सामान्य र द्रुत सेवा गरी दुई तरीकाबाट एमआरपी वितरण गर्दै आएको छ । अत्यावश्यक नपरेको तथा १÷२ महीनाभित्र एमआरपी पाए पनि हुने सेवाग्राहीका लागि सम्बन्धित जिप्रकाबाटै उपलब्ध गराउने गरेको छ । यस्तो तरीकाबाट एमआरपी लिनका लागि रू. ५ हजार शुल्क लाग्छ । तर, छिटो एमआरपी चाहिनेले दोब्बर दस्तुर तिरी केन्द्रीय राहदानी विभागबाटै फारम भर्नुपर्ने खनालले बताए । यसका लागि पनि सम्बन्धित जिप्रकाबाट नागरिकताको प्रमाणीकरण गरेर ल्याउनुपर्छ । दोब्बर दस्तुर तिरी विभागबाटै फारम भर्दा एक हप्ताभित्रै राहदानी पाइन्छ । विभागले हस्तलिखित तथा कम्प्युटरबाट भरिएको दुवै फारमद्वारा एमआरपी दिन्छ ।
तर, हस्तलिखितभन्दा पनि कम्प्युटरबाट भरिएको फारमलाई विभागले प्रोत्साहन दिने गरेको छ । एमआरपीमा राखिने फोटो खिच्दा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्दछ । जिल्लाबाट भरेर आएका फारमहरूमा फोटोमा बढी समस्या देखिएको खनाल बताउँछन् । जिल्लास्तरमा फोटो खिच्दा एमदमै ध्यान दिनुपर्दछ । फोटो नमिलेकै कारण कतिपय मानिस त्यतिकै फर्केका छन् भने कतिपयले दोहोर्‍याएर खिच्ने गरेको विभागले बताएको छ । एमआरपी फारम भर्न ४ दशमलव ५ सेण्टिमिटर उचाइ तथा ३ दशमलव ५ सेण्टिमिटर चौडाइ भएको फोटो चाहिन्छ । त्यसमा पनि अनुहारको भाग बढी देखिएको चाहिन्छ । पासपोर्ट साइजको फोटोको ७० देखि ८० प्रतिशत क्षेत्रफल अनुहारले ओगटेको हुनुपर्छ ।
कसरी भर्ने एमआरपी फारम ?
एमआरपी बनाउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रिय राहदानी विभागले नै फारम उपलब्ध गराएको छ । यदि कम्प्युटरबाट डाउनलोड गरेर निकाल्न चाहेमा विभागको वेबसाइड धधध।mयाब।नयख।लउ मा लगइन गरेर फारम प्रिण्ट गर्न सकिन्छ । फारममा आफ्नो नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग, दरखास्त दिने कार्यालयको ठेगाना, नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको मिति र स्थानजस्ता कुरा स्पष्ट र बुझिने गरी भर्नुपर्दछ । एमआरपी लिनका लागि आवदेन दिन निम्न कागजात बुझाउनुपर्दछ ।
रितपूर्वक भरिएको दरखास्त फारमको दुईप्रति
नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रति र त्यसको प्रतिलिपि
सम्बन्धित जिप्रकाबाट नागरिकता प्रमाणीकरणको फारम
राहदानी दस्तुर तिरेको रसिद
६ महिनाभत्र खिचेको दुईप्रति रङ्गिन फोटो